Fadhi ku dirirka iyo faallada shacabka (Sheeko Siyaasadeed xiiso badan) - Caasimada Online
Home Maqaalo Fadhi ku dirirka iyo faallada shacabka (Sheeko Siyaasadeed xiiso badan)
Fadhi ku dirirka iyo faallada shacabka (Sheeko Siyaasadeed xiiso badan)
Dharaar weliba sheeggeed,
Xaaji Ducaale: War miyaan laguu sheeginba? Meeshii waa lagu kala tegay, oo xitaa Booliis baa yimid, meeshii muran xooggan baa ka dhacay oo ragbaa isku daqrey, waxaana laysku maandhaafey Dowladda cusub iyo qorshaha Golaha Wasiirrada, Duqa Magaalada Muqdisho, iyo Arrimaha Jubbooyinka. Xaaladdu farahey ka baxdey ee halkii yarayd ee Masaajidka u dhawayd Majliskii Casariyahaan fadhiyaa aniga iyo Xaaji Duulduul oo arrinta ku soo baxaye noogu kaalay.
Xaaji Ducaale: Adeeroow wax laysku dilaa meesha ma oolline, ninkii Xaaji Dirir ahaa iyo Diini ayaa muran xooggani ku dhexmaray meesha, markaasaa Xaaji Dowlad mar keliya yidhi, arrintu sidaa maaha Jubbooyinka Soomaali oo dhan ayaa wada degta, waana deegaan Soomaaliyeed, gobollada badankooda waa laysla degaa, deegaanka in la inkiraana ma fiicna, dabadeed wuxuu tiriyey reeraha dega: Jaleefan, Jiic, jadeer, jawdheer, jaleele, jilib, jeerin iqb, intaasiba waa degaan meelahay kala degaana waa sheegay,dee ninkii Dirir ayaaba intuu afka ka xunbeeyey mar qudha dagaal oodda kaga qaaday Xaaji Dowlad, Diinibaa isaguna xanaaqay oo Bakoorad madaxa ku bashaaqiyey Xaaji Dirir, meeshii waa laysla oogsaday, ciyaalkii ayaa mar keliya ku qeyliyey meesha fadhiyey Jubbooyinka waa laysla degaa, ninkii Xaaji Dirir ee aad ogayd dulqaadkiisa, ayaa ilaa saaka ciyaalkii iyo isagu is eryanayeen, oo kii yidhaahdaa waa laysla degaaba dhagax ayuu ku tuuraa ilaa Booliis ka yimaado oo la garbaduubey.
Xaaji Duulduul: Bismilaahi Raxmaani Raxiim, war niyaw Wallaahay waxbaa dhacay, kkk oo hadda ma waxaad i leedahay Xaaji Dirir wuxuu ka xanaaqayaa Jubbooyinka waa laysla degaa? Waxaan beri anigoo socdaala tegay Magaalada Burco, Masaajid ayaan ku tukadey markaasaan arkay nin waalan oo ciyaalka eryanaya waxaan ku idhi: Odayaal meesha joogay maad ka celisaan? Waxay yidhaahdeen, waxba maqli maayo oo waa noocaasoo, wuxuu ka xanaaqaa waa la dhimanayaa, ninkii oo noo dhaw ayaan eraygii markaan maqlay anigoon is ogayn idhi maxaad tidhi? Waa la dhimanayaa ayuu ka xanaaqaayaa, dee intuu maqlay ayuu dhagaxii igu soo maguujey oo halkaa Salxanta igaga dhuftay oo dhiiggu butaacay, dee iminka waa halis, haddii Xaaji Dirir sidaa ku sii wado waa waalanayaa ee ma laga soo daayey Booliiska mise weli waa xidhan yahay?
Xaaji Duul duul: Wcs, waa la fiican yahay dhibna ma jiro intaad ogtahay uunbaa dhacday, balse, waxaa la waayey ninkii Xaaji Dirir ku odhan lahaa waad geftey, waadna dagaallantay , nimankii saaxiibbadaana qaladbaad ka gashay, kaftankuna inuu heerkaas gaadho maaha, Xaaji Dirir waa in xaal laga qaadaa oo loo sheegaa in Jubbooyinka la wada degan yahay, dalka oo dhanna la wada deganyahay, balse, yaa u sheegayaa meesha taal? Illeen Xaaji Dirir waa soo jeestaye!